ခှေးဖွဈတဲ့နေ့ – My Blog
ခှေးဖွဈတဲ့နေ့ (အစ အဆုံး)
သူမြားစာအုပျတှတေငျနတောမြားပွီ ကိုယျ့အကွောငျးလေးပဲ ကိုယျပွောမယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈလောကျကပေါ့.။ဖွဈတာ ပွောပါ တယျ။ ညီမလေးတဈယောကျရှိတယျ။ တဈဝမျးကှဲပေါ့။ အသကျက သိပျမကှာဘူး။ သူက အဲ့တုနျးက ၁၀တနျး။ ကနြျောက တက်ကသိုလျတကျနတောပေါ့။ သူ့အဖကေ မလေးမှာအလုပျလုပျနတော။ အမနေဲ့ ၂ယောကျထဲနရေတာပေါ့။ ကနြျောက ကနြေျာ့ ညီမကိုအမွဲ စာပွပေးနကြေ။ သူ ၃ တနျးလောကျထဲကစပွီး ၁၀တနျးထိ ကနြျောပဲ ကြူရှငျဆရာဖွဈခဲ့တာ။ ၁၀တနျးကတြော့ သူ ကြူရှုငျတှဘောတှတေကျခှငျ့ရတယျ။ကတြျောက ဂိုကျပေါ့။ မှတျမှတျရရ အဲ့နကေ့ သီတငျးကြှတျ။ ကြောငျးဆယျရကျပိတျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြူရှငျက စာမေးပှဲဖွရေမယျဆိုတော့ သူ့ကို ညလုံးပေါကျ သငျရတာပေါ့။ ကတြျောလညျး အဒျေါ့အိမျသှားအိပျရတာ ပေါ့။
သီတငျးကြှတျကာလဆိုတာ ၁၀တနျးကြောငျးသားတိုငျးအတှကျ ရုနျးကနျနရေတဲ့အခြိနျပဲလေ။ စာတှကေလညျးမြား ဖိအားက လညျးမြားဆိုတော့ အကုနျကွိူးစားနတေဲ့အခြိနျ။ အဲ့နညေ့က အမြိုးတဈယောကျ မင်ျဂလာဆောငျတော့ သူ့အမကေ သှားကူလုပျပေး တယျ။ အိမျမှာ သူနဲ့ကနြျော၂ယောကျတညျး။ အဲ့အခြိနျအထိ စိတျရိုငျးတှမေဝငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူကမေးတယျ။ ‘ကိုကွီး မင်ျဂလာဆောငျကွရငျ bioထဲကလို လုပျတာပေါ့နျော ဟီဟီ’ဆိုပွီး။ အဲ့စကားလညျးကွားရော ညီတျောမောငျက ထောငျးခနဲမတျလာ ကော။ ကံဆိုးတာက အတှငျးခံဝတျမလာမိဘူး။ ပုဆိုးကွီးနဲ့ ထိုငျရာကမထပဲနဲ့ ခေါငျးပိတျခေါကျလိုကျ။ ဒီကလေးမ ကလေးလိုမနေ ဘူး ဆိုပွီး ဆူပွီး စာလုပျခိုငျးထားပွီး သေးပေါကျဖို့နောကျဖေးထှကျလာခဲ့တယျ။ အဲ့တော့မှ ဒုက်ခရောကျတာ သေးပေါကျပွီးပမေယျ့ လီးတောငျတာက မကသြေးဘူး။
ဟိုရမျးဒီရမျးနဲ့။ အိမျသာဘေးက ရကေနျဘေးမှာလှမျးထားတဲ့ စကပျလေးတှလေညျးမွငျရော ခှေးစိတျက အဲ့တော့မှပေါကျလာ တော့တာ။ စကပျလေးတဈထညျကို အသာရုတျပွီးတော့ လီးကွီးကို ပှတျသပျရငျးနဲ့ ဂှငျးတိုကျနမေိတယျ။ ကိုယျဘာလုပျလို့လုပျမိ မှနျးလညျးမသိဘူး။ အညို့ခံထားရသလိုပဲဗြာ။ အဲ့ဒီအခြိနျဘာလာတာားတားရမယျမထငျဘူး။ လူစိတျတှလေညျးပြောကျသှားတယျ။ဂှငျးတိုကျလို့ သိပျမကွာပါဘူး ၈ခကျြ ၁၀ ခကျြလောကျ ဆောငျ့ပွီးပွီးသှားတယျ။ ပွီးသှားတော့မှ လူစိတျပွနျဝငျလာရော။ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးမှာလညျး လရညျတှေ ပကေုနျရော။ အဲ့တော့မှခေါငျးပူတာ။ အဒျေါက ယောကျြားမရှိတော့ပမေယျ့ လရ ညျနံ့တော့ သိမှာလေ။ ညီမရဲ့ အတှငျးခံမှာပနေတေဲ့လရညျတှကေို အမွနျရလေောငျးပွီးဆေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ခပျတညျတညျ ပဲ အိမျရှစေ့ာသငျဝိုငျးကို လာပွီး စာထိုငျမေးတယျ။
ညီမလေးက တော့ပွုံးစိစိနဲ့ ဘာကိုသဘောကနြလေညျးမသိဘူး။ အဲ့အရှယျမွီးကောငျပေါကျမလေးတှကေ အမွဲအဲ့တိုငျးပဲဆိုတော့ သိပျသတိမထားမိဘူး စာဆကျသငျနေုလိုကျတယျ။ ည၁၀နာရီလောကျကတြော့ အဒျေါကပွနျရောကျလာတယျ။ အဒျေါပွနျ ရောကျလာတာနဲ့ ကနြျောလညျးစကျဘီးလေးယူပွီးပွနျလာတယျ။ နောကျနေ့ ညနေ စာသှားသငျတော့မှ ညီမက ‘ကိုကွီး…လြျော တာပွောငျလညျးမပွောငျဘူျးခိ’ဆိုပွီး စပျဖွီးဖွီးနဲ့ မေးတယျ။ ကနြျောလညျး ကွကျသီးမှေးညှုငျးတှထေပွီး ခေါငျးတှကွေီးသှား တယျ။ ဒါပမေယျ့ လူကွီးဆိုတော့ ခပျတညျတညျပဲ။ ‘အျော နငျ့ဘောငျးဘီလား အေးလေ ငါရအေိမျက အထှကျလကျဆေးရငျးနဲ့ အဝတျတနျးတိုကျမိတာ ပွုတျကသြှားလို့ ပွနျဆေးပေးထားတာ’ (ယုတ်တိမရှိတာတော့ သိတယျ။ မတတျနိုငျဘူးလေ ပါးစပျထဲရှိတာ လြောကျပွောရတာပဲ။)
‘ဒါဆို အနံ့တှကေ ဘာနဲ့တှတေုနျး ဟှနျး ကိုကွီးနျော မမေနေဲ့တိုငျပွောမယျ’ဆိုပွီး ထကောကျပါလရေော။ အဲ့တော့ မှပွေးပွီး ကိုယျ့ ညီမကိုယျတောငျးပနျ၇တာ။ ညီမလေးရယျ ကိုကွိးမှားပါတယျ စိတျကထ နလေို့ ဂှငျးတိုကျမိတာပါကှာ နျော မတိုငျပါနဲ့ ညီမလေး ကလိမ်မာပါတယျဆိုပွီး ပခုံးလေးကိုငျရငျး ပွောတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ သူက အူကွောငျကွောငျပွနျကွညျ့နတေယျ။ ပွီးတော့ ‘ဂှငျး တိုကျတယျဆိုတာ ဘာကွီးလညျး ကိုကွီး’တဲ့။ အဲ့တော့မှ စကားလှနျသှားမှနျးသိတယျ။ သူက အဖွူထညျလေးလေ။ဘာမှသိတာ မဟုတျဘူး။ ‘ဟီ..ဘာမှမဟုတျပါဘူးကှာ။ လာထိုငျစာလုပျမယျ’လို့ပွောပမေယျ့ သကောငျ့သားမက- ‘ ဟငျ့အငျး မရဘူး။ပွောပွရငျ ပွောပွမပွောပွရငျ မမေနေဲ့တိုငျပွောနဲ့ဆိုပွီးရဈပါလရေော။’
ကွံရာမရတဲ့အဆုံး ရှငျးပွလိုကျ၇တယျ။ တဈကိုယျရညျအာသာဖွတောဖွဈတဲ့အကွောငျး စိတျရိုငျးဝငျသှားတာဖွဈကွောငျး။ အဒျေါနဲ့မတိုငျဖို့ကောပွောရပါလရေော။ အဲ့တော့မှ ပိုဆိုးကော။ဘယျလိုလညျးလုပျပွတဲ့။ အဲ့တော့မှ ထိနျးထားတဲ့စိတျက ထလာ ရော။ ကိုယျ့ညီမကိုယျဆိုပမေယျ့ ၂ယောကျတညျး အိမျထဲမှာ။ ပွောနတောကလညျး စိတျထစရာတှဆေိုတော့။ လာအခနျးထဲလာ ဆိုပွီး သူ့အိပျခနျးထဲချေါသှားပွီး ပုဆိုးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးခြှတျပွတယျ။ အဲ့မှာ အတှငျးခံဘောငျးဘီ မခြှတျရသေး။(ဒီနကေ့တြော့ ဝတျလာမိတယျ )လီးက တောငျနတေော့ ဖောငျးဖုဖုကွီးဖွဈနတောပေါ့။ အဲ့တော့ ညီမက ဆကျပွောတယျ။ လုပျပွလတေဲ့။ ဟုတျ ပွီဆိုပွီး အတှငျးခံကို ခြှတျလညျခြှတျလိုကျရော ရမျးတမျးတမျးကွီးထှကျခလြာပါလတေယျ။ ဟယျ..အကွီးကွီးပဲတဲ့။ ကနြေျာ့လီး ကသိပျတော့မကွီးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့သူ့အတှကျတော့ ပထမဆုံးမွငျရတဲ့လီးလေ။ သူရှကျသှားတယျ။
တျောပွီကိုကွီး ပွနျဝတျတော့ဆိုပွီး။ ကုတငျပျေါ အရုပျကွိုးပွတျုထိုငျကသြှားတယျ။ အဲ့တော့မှ လူက ရှဲ့ခငျြလာတာနဲ့။ ဟဲ့ကွညျ့ မယျဆိုလာလေ ဒီမှာကွညျ့ ဂှငျးတိုကျတယျဆိုတာ ဒီလို လီးကို ဒီလိုလေး ဒီလိုလေးဆိုပွီး သူ့မကျြနှာနား သှားပွီးလုပျပွတယျ။ သူ လညျး ပထမတော့ ရှကျနသေေးတယျ။နောကျကတြော့ ငိုကျကနြတေဲ့ခေါငျးက မော့ကွညျ့ပွီးတော့ ဇတျခနဲ့ ကနြေျာ့လီးကို ပဈကိုကျ ပါလရေော။ အဲ့တဈခုကနြျောမပွောရသေးဘူး သူက ငယျငယျလေးထဲက အသကေိုကျတာ။ရနျဖွဈရငျလညျးကိုကျတယျ။ စခငျြ ရငျလညျးကိုကျတယျ။အခုက သူ စခငျြလို့ပါ။လီးကို ဖွတျကိုကျတာ အား ခနဲဖွဈသှားတယျ။နောကျတော့မှ ကိုကျခငျြဦးဆိုပွီး ခေါငျး နောကျက ကိုငျပွီးဆငျေ့ထညျ့လိကျတာ အာခေါငျကိုထောကျသှားပွီးဝူးဝူးဝါးဝါးဖွဈသှားတယျ။ အဲ့တော့မှ လူကို ရိုကျရောဝူးဝူးနဲ့။
ဘယျရမလညျး ငါ့ကိုကိုကျတဲ့ ဟာမလေးဆိုပွီး ပါးစပျကိုလိုးလိုကျတယျ။ သူ့ရဲ့ လြာလေးတှနေဲ့ လီးနဲ့ပှတျသတျသှားတိုငျးလူက ပွီး ခငျြသလိုလိုဖွဈဖွဈသှားတယျ။ သူ့ရဲ့ ခေါငျးကို ကိုငျပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျနဲ့ ဆောငျ့ပေးနလေိုကျတာ ၅ ခကျြ၆ခကျြလောကျနဲ့ လ ရညျတှကေ သူ့ပါးစပျ အပွညျ့ထှ့ကျသှားပါလတေော့တယျ။ ညီမလေးပါးစပျထဲမှာ သုတျရညျတှဝေငျသှားကော ပြို့ခနဲ့ဖွဈပွီး ညီမ လေးဝူးဝူးဖွဈကော။ အဲ့တာနဲ့သူ့ပါးစပျထဲကလီးကို ဆှဲထုတျပွီး ဘေးနားက ရဘေူးကိုလှမျးပဈပေးလိုကျတယျ။ မြိုခဆြိုပွီး။ မြိုခြ ခိုငျးတယျ။ညီမလေးလညျး မထူးဇာတျခငျးတယျထငျပါရဲ့ မြိုခလြိုကျတယျ။ နှုတျခမျးဘေးကနကေလြာတဲ့သုတျတှကေိုတော့ ကြ နေျာ့ လကျဖဝါးနဲ့ သုတျပေးလိုကျတယျ။ ကနြျောကလညျး ကနြေျာ့ ညီမလေးရဲ့ နို့အုံလေး၂ခုကို အပျေါက မိုးကွညျ့နသေလို ကနြေျာ့ ရဲ့ လီးရှညျရှညျကွီးကို ညီမလေးကလညျး မခို့တရို့ပွနျကွညျ့နတေယျ။ ၁ခြီပွီးသှားပွီဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ညီမရဲ့ပါးစပျကို ဆောငျ့လိုး ထားတာဆိုတဲ့ အသိက ကနြေျာ့ကို တနျးခနဲ တနျးခနဲ ပွနျထောငျမတျလာစတေယျ။
နှဈယောကျသား ဘာလုပျရမှနျးမသိသေးခငျမှာ သူ့ရဲ့ ကုတငျခေါငျးရငျးက နာရီက ၅နာရီထိုးပွီဖွဈတဲ့ အကွောငျး အသံ၅ခကျြမွညျပွီး အခကျြပေးတယျ။ အဲ့တော့မှ သူက ‘ဟာ.. ကိုကွီး သမီး ၅နာရီကရြငျ မွနျမာစာ ကိုကွီးဆီမှာ ဖွရေမယျလေ’ဆိုပွီး ထပွေးဖို့ပွငျတယျ။ ကုတငျပျေါက သူထထခငျြး ကနြျော လညျး သူ့ခြိုငျးကနမေပွီး ကုတငျပျေါကို ပှတေ့ငျလိုကျတယျ။ ‘ ဒီလိုရမလား ညီမလေးရာ ‘ ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ထမိနျကိုဖွညျပွီး မခြှတျပဲနဲ့ ခေါငျးဝငျလြိုလိုကျတယျ။ အဲ့တော့မှတှတေ့ာ မနကေ့ အတှငျးခံလေး သူဝတျထားတာပဲ။ အတှငျးခံကလညျး စောကျဖုတျက ထှကျလာတဲ့ အရညျကွညျတှနေဲ့စိုရှဲနတောပဲ။ ကနြျောလညျး အခြိနျမဆိုငျးပဲ ဆီးခုံလေးကို ဘယျဖကျလကျနဲ့ ဖှဖှလေးပှတျပေးနေ တယျ။ အတှငျးခံကို မခြှတျသေးပဲညာဖကျလကျကလညျး စောကျဖုတျ အကျကှဲကွောငျးလေး ကို လကျလေးခြောငျးနဲ့ အထကျအောကျ စုနျဆနျ ဆှဲပေးနလေိုကျတယျ။
သူ(မ)ရဲ့ ပေါငျတှငျးသားလေးတှကေိုလညျး ပါးစပျနဲ့စုတျရငျး လြာနဲ့ယကျရငျးပေါ့။ ၂မိနဈလောကျလုပျပေးနရေငျး အားမရတာနဲ့ထမိနျကိုဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ ညီမလေးရဲ့ မကျြနာဟာ နီမွနျးနတောပါပဲ။ ညီမလေးရဲ့ အတှငျးခံကို အသာခြှတျလိုကျပွီး လြာနဲ့ အဖုတျထိပျက အစိလေးကို မထိတထိလေးတို့ပေးလိုကျရော ‘ကိုကွီး ဘာတှလေုပျနတော လညျးး..အား…ဘုနျးတှနေိမျ့ကုနျတော့မှာကှာ…..အငျး’ဆိုပွီး အသံမြိုးစုံထှကျလာပါရော။ အစိလေးကို စုပျလိုကျ အကှဲကွောငျးလေးကို လြာလေးနဲ့လကျြလိုကျလုပျရငျး လကျကလညျး တငျပါးနှဈလုံးကို ပယျပယျနယျနယျ ဖွဈညှဈပေးနတောပေါ့။ ကောငျမလေး ထှနျ့ထှနျ့လူးရငျးနဲ့ ၃မိနဈလောကျနဲ့ အရညျတှေ ဒလဟောထှကျကလြာတော့တယျ။ ”အား..ပွီးပီ ကိုကွီး အ အ”ဆိုပွီးတော့ အျောရငျး ကနြေျာ့ကြောကုနျးကို ကုတျခွဈ လိုကျပါတော့တယျ။
“အငျး…အား…ကောငျးတယျ..။ကိုကွီး ဖွညျးဖွညျး ဖွညျးဖွညျး အိုး” ဒျေါပုံ့ပုံ့ အိမျရှတေံ့ခါးက အဝငျ ကွားလိုကျရသောအသံ ဖွဈသညျ။ အသံကွားကွားခငျြး ခေါငျးတှခေဲသှားသညျ။ သမီးရဲ့ အခနျးထဲက လာသညျ့အသံကွောငျ့ ကမ်ဘာကွီးလညျနတောပိုမွနျ သှားသလိုခံစားလိုကျရသညျ။ ဒျေါပုံ့ပုံ့ အကွောငျးပွောပါဦးမညျ။ ဒျေါပုံ့ပုံ့သညျ ငယျငယျရှယျရှယျ ၁၇နှဈထဲက ခဈြသူနှငျ့လိုကျ ပွေးးပွီး အိမျထောငျကလြာခွငျးဖွဈသညျ။ အသကျ၁၈မှာ တဈဦးတညျးသော သမီးလေး နှယျခညျြကို မှေးသညျ။ ပုံ့ပုံ့တို့ လငျမယားမှာ ငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့ အိမျထောငျကသြောကွောငျ့ အဆငျမပွကွေပေ။ တဈပတျ ၄ရကျလောကျက ရနျသတျနကြေ ပငျ။ ယောကျြားကောမိနျးကကော ၂ဖကျမိဘ သဘောမတူသောကွောငျ့ ဒုက်ခဆငျးရဲကို ဒူပဒေနျပခေံနခွေငျးသာဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ သူတို့လငျမယားသညျ အိမျထောငျသကျ၁နှဈမှာပငျ ကလေးတဈယောကျရသညျ။
ဒီကလေးမလေး သူတို့လငျမယား ဖွဈသမြှပွသနာတိုငျးအားပွလေညျစသေညျ။ ကှဲဖို့ကှာဖို့အထိဖွဈလာတိုငျး သမီးမကျြနှာပွနျကွညျ့နရေသောကွောငျ့ နှယျခညျြဟု ပုံ့ပုံ့ကပေးထားခွငျးဖွဈသညျ။ တဈဦးတညျးသော သမီးလေးမို့တုနျနအေောငျခဈြသညျ။ သူဌေးသားဘဝကနေ ကနျခခြံလိုကျရ သော ယောကျြားဖွဈသူတောငျမှ သမီးရှရေ့ေးအတှကျ နှယျခညျြ၈တနျးကတညျးက နိုငျငံခွားသှား အလုပျကွမျးလုပျနသေညျ။ အခုဖွဈရပျကွောငျ့ ဒေါသတှမေိုးပွိုသလို ဒျေါပုံ့တဈယောကျ ပေါကျကှဲရသညျ။ ငါ့သမီးလေး လိမ်မာလှ လိမ်မာလှနဲ့ အခနျးထဲမှာ ဘယျကအကောငျနဲ့ ခှေးဇာတျခငျးနသေညျမသိ။ ဒျေါပုံ့ ထမိနျတိုတိုဝတျကာ အိမျထဲသို့ဝငျခလြာသညျ။ အခနျနားအရောကျတှငျ “အား ပွီးပွီ ကိုကွီး ပွီးပွီ “ဟူသော သမီး၏ ဏှာသံပါပါ စကားကိုကွားလိုကျရသညျ။ ဒျေါပုံ့ ဝုနျးဒိုငျးကွဲသောငျးကနျြးပဈခငျြ သညျ။ သို့ရာတှငျ အရငျဆုံး သူတို့မရိပျမိအောငျ သမီးအခနျးနှငျ့ဘေးခငျြးကပျလကျြ သူမတို့လငျမယား အခနျးထဲမှနကော ထရံ ပေါကျခြိုးပွီး ခြောငျးကွညျ့လသေညျ။ “ဟာ.. ဒီကောငျ လေး… “ဒျေါပုံ့ စှံ့အသှားသညျ။ ခုနက ဖွဈနသေောဒေါသတှလေညျး ကွကျပြောကျငှကျပြောကျပြောကျသှားသညျ။
သားတဈယောကျကဲ့သို့ ယုံကွညျခဈြခငျရသော တူတျောမောငျက မိမိ၏ ခဈြလှစှာ သောသမီးလေးအား စောကျဖုတျဖွဲကာ လကျြနခွေငျးဖွဈသညျ။ မွငျကှငျးကိုမမွငျခငျက ဖွဈခဲ့သော ဒေါသတှပြေောကျပွီး အားငယျခွငျး လောကကွီးအပျေါအယုံကွညျနညျးခွငျး မိမိ ခဈြခငျယုံကွညျသူတို့က သစ်စာဖောကျခံရသော ခံစားခကျြမြား ဖွငျ့ ဝမျးနညျးပကျလကျဖွဈမိနသေညျ။။ ထိုစဉျ တူတျောမောငျ ကြျောနိုငျထံမှ ” ညီမလေး ပေါငျကားလိုကျ ညီမလေးကို ကိုကွီးလိုး တော့မယျ”ဟူသော တဈတဈခှခှ စကားသံကွီးအား ကွားလိုကျရစဉျ ဒျေါပုံ့တဈယောကျ စောကျဖုတျကွီးဖောငျးကွှလာလေ တော့သညျ။ ဒျေါပုံ့သညျ သှေးဆုံးနသေော အဖှားကွီးတဈယောကျမဟုတျ ၁၈နှဈမှာ ကလေးရပွီ ၃နှဈလောကျ လိငျမဆကျဆံရ သေးသော ငယျသှေးမကုနျသေးသော မိနျးမတဈယောကျသာဖွဈသညျ။ သူမအသကျမှာ ၃၂နှဈသာရှိသေးသညျ။ ဒီစိတျတှေ ကုနျသေးသညျမဟုတျ။ အခုလညျး မိမိသမီးကို မိမိတူက ပေါငျဖွဲကာ လိုးမညျ့အကွောငျ့ကိုနားနဲ့ဆတျဆတျကွားပွီးပွီးခငျြး အဖုတျမှာ ကွှလာသညျ။ မိမိကိုယျကိုလညျး ရှကျမိသညျ။ မကျြတောငျမခတျကွညျ့နရေငျး သမီးလေး၏ အဖုတျလေးထဲသို့ တူ တျောမောငျက လီးထိပျလေးကို တငျရငျး စှပျခနဲထညျ့လိုကျသညျ။ သမီး၏ ဖငျလေးကော့တကျလာကာ “အ”ဟူသောအသံလေး ထှကျလာသညျ။
တူတျောမောငျက “ညီမလေး နာလား နာရငျမလုပျတော့ဘူးနျော”ဆိုတော့ သမီးက “ရပါတယျကိုကွီးရယျ လိုး သာလိုးပါ” တဲ့။ ဒီသမီးတျောတျောယှသည။ျ တှေ့ဦးမယျ ပွီးမှ တတောငျလောကျရှိတဲ့သခှားသီးထုိးထညျ့ဦးမယျ။ အခုတော့ ဆကျကွညျ့နမေိသညျ။ လီးထိပျဖြား စိုကျဝငျနသေော သမီးအဖုတျအား ကွညျ့နရေငျး ဒျေါပုံ့ အဖုတျကွီးမှာ အတှငျးခံနှငျ့မဆနျ့ တော့အောငျဖောငျးကွှလာသညျ။ ဒျေါပုံ့ မွငျကှငျးကို မကျြတောငျမခတျကွညျ့ရငျး ထမိနျကိုခြှတျလိုကျသညျ။ ဒျေါပုံ့ ထမိနျခြှတျ ပုံမှာရယျစရာတော့ကောငျးသညျ။ ကွညျ့ပါလေ..ကုတငျပျေါမှ နကော ထရံပေါကျမှနပွေီး လေးဖကျထောငျခြောငျးကွညျ့နခွေငျး ဖွဈသညျ။ စောကျဖုတျကွီးဖောငျးလာသဖွငျ့ ထမိနျခြှတျတော့လညျး လကျနောကျပဈပွီး ထမိနျကို ဆှဲခလြိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ဒျေါ ပုံ့မှာ တခွားမိနျးမတှလေို ပိနျညောငျရိုးမ မဟုတျပေ။ စညျပိုငျးကွီးလညျးမဟုတျပေ။ ဆိုဒျက ၃၁.၂၄.၃၆ ဆိုဒျဖွဈသညျ။ ထမိနျ ခြှတျလိုကျသျော ဖငျလုံးကွီးကပွူးခနဲပျေါလာသညျ။ အတှငျးခံကိုခြှတျတော့ အတျောလကျဝငျနသေညျ။ လကျဝငျတာပေါ့ ဖငျကွီး တဲ့မိနျးမပဲ ပုံမှနျခြှတျတာတောငျမနညျးခြှတျရတာ။ လေးဘကျကုနျးအနထေားကို မပွငျပဲနဲ့ မရရအောငျခြှတျနတေော့ ခြှတျမရဖွဈ နသေညျ။ ဖငျက ကုနျးလိုကျ ကှလိုကျနဲ့ ဒျေါပုံ့တဈယောကျဒုက်ခတှနေ့တေော့သညျ။
ကံဆိုးသညျမှာ ဒျေါပုံ့ဒေါသတကွီး အခနျးထဲဝငျလာစဉျမသှေ့ားသညျက ပွူတငျးးပေါကျတံခါးပိတျဖို့ဖွဈသညျ။ ဒျေါပုံ့တို့ အိမျဘေးမှာ တဈကိုယျတညျးသမား လူပြိုကွီး အေးမောငျ နသေညျ။ အမှနျကအေးမောငျသညျ လူပြိုကွီးမဟုတျ လူပွိုကွီးဖွဈသညျ။ ဏှာအလှနျထနျသညျ။ ညည ဖာမြားချေါချေါခနြကွေဖွဈသညျ။ ဏှာကိစ်စနဲ့ပတျသတျ၇ငျ အလှနျအကွံကွီးသညျ။ ဒျေါပုံ့တို မိသားစု ဘေးအိမျကို ပွောငျးလာသညျ သိသိခငျြးသူ၏ ၂ထပျအိမျကို အပျေါထပျပွူတငျးပေါကျမြားအား တနျဖိုးကွီး တဈဖကျမွငျ မှနျမြားပွောငျးတပျထားသညျ။ နှယျခညျြရခြေိုးတိုငျးခြောငျးနကွေဖွဈသညျ။ ဒျေါပုံ့အခနျးကိုလညျးသူအိမျပျေါထပျ တကျကွညျ့ ရငျမွငျရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဒျေါပုံ့မှာ ပွူတငျးတံခါးအား ဂရုတစိုကျပိတျလရှေိ့သညျ။ ကုတငျဘေးတှငျ ပွူတငျးပေါကျရှိသညျ။ ပွူတငျးပေါကျတှငျ အေးမောငျမကျြလုံးရှိသညျ ဟူသော အသိကွောငျ့ အလှနျပူသော ညမြားမှာပငျ တံခါးဖှငျ့မအိပျရဲ။ ရမေိုးခြိုးပွီး ရငျလညျး အဝတျအစားလဲဖို့တံခါးအရငျပိတျရသညျ။ အိမျက ငှကွေေးခကျခဲသောကွောငျ့ ခွံထဲမှရစေညျကို သှပျလေးသာကာ ထားနိုငျသညျ။ ယခုတော့ ပွူတငျးတံခါးပိတျဖို့မသေ့ညျ့အပွငျ ပွူတငျးပေါကျဖကျသို့ ဖငျကွီးထောငျကာ ကော့လိုကျ ကုနျးလိုကျနဲ့ အေးမောငျ အကွိုကျဖွဈနတေော့သညျ။
အေးမောငျဆိုတဲ့ကောငျကလညျး ဘိုငျနိုကူလာ ချေါ အဝေးကွညျ့မှနျဘီလူးကို သင်ျဘောတကျထဲကဝယျထားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ မှနျဘီလူးတဈလကျနဲ့ အေးမောငျ အခုတော့ ဒျေါပုံ့ရဲ့ အောကျပိုငျးနဲ့ အနောကျပိုငျး အလှကို ခံစားရငျး ဂှငျးတိုကျနလေေ တော့သညျ။ ဒျေါပုံ့တဈယောကျ ဖငျတုံးကွီး ကော့ကာ လနျကာနှငျ့ အတှငျးခံခြှတျနတေုနျး။ အနောကျမှ ပူပူနှေးနှေးအတံကွီးကို သှားစမျးမိလသေညျ။ လကျနောကျပဈရငျး ထိုအတံကွီးအား ဖဈြကွညျ့လိုကျရာ တဒုတျဒုတျနှငျ့လှုပျနသေညျ။ ပုံ့ပုံ့တဈယောကျ လညျး ယောကျြားတဈယောကျ၏ လီးတံကွီးမှနျး သိလိုကျကာ နောကျလှညျ့ကွညျ့ရနျ အပွငျ လကျအား ခြိုးထားသညျ။(လကျခြိုး သညျဆိုမှာ လကျအနောကျပဈကာ လှုပျမရအောငျ ပငျ့တငျထားခွငျးဖွဈသညျ။ယောကျြားလေးမြား ငယျစဉျက အခငျြးခငျြးစရငျး နောကျရငျးလုပျဖူးကွသညျ- စကားခပျြ) ပုံ့ပုံ့ ရုနျးလိုကျတိုငျး ရုနျးလိုကျတိုငျး လကျက အောငျ့ခနဲ နာသညျ။ သို့သျောလညျးမအျောရဲ။
လကျတဈဖကျထဲနဲ့ လေးဘကျကုနျးတာ အတျောကွာသှားသဖွငျ့ ခှကေသြှားကာ ဖငျဘူးတောငျးထောငျသလိုဖွဈသှားသညျ။ ဘေးခနျးမှ သမီး၏ ” အား..အား.အ…ကောငျးတယျ အကို လိုးလိုး “ဟူသောအသံသညျလညျး နားထဲသို့ တောကျလြောကျဝငျလာ နသေညျ။ ထိုစဉျမိမိ၏ တငျပါးပျေါသို့ လီးတနျကွီးအား တငျထားသညျကိုသိလိုကျရသညျ။ အနောကျမှလူသညျ ပုံပုံနားနားကပျပွီး “အျောခငျြအျောလိုကျလေ. . .မအျောခငျြရငျ လိုကျခဲ့”ဟုတိုးတိုးလေးကပျပွောသညျ။ပုံပုံ့ဘာပွနျဖွေ၇မှနျးမသိ။ ထိုလူမ.”လိုကျခဲ့ မယျဆိုခေါငျးငွိတျစမျး.. .”ဟုပွောရငျး ပုံပုံ့၏လကျအား ဖိတှနျးလိုကျသညျ။ နာကငျြလှသဖွငျ့ ခေါငျးကို တရစပျငွိတျလိုကျ မိသညျ။ ထို့နောကျတှငျမူ ထိုသူသညျ ပုံ့ပုံ့၏ အတှငျးခံကို အသာအယာခြှတျလိုကျသညျ။ ပုံ့ပုံ့မှာ အပျေါပိုငျး ရငျဖုံးအကြီင်္နှငျ့ အောကျပိုငျး ဗလာဖငျပွောငျ စောကျမှေးတဈထောငျထောငျနှငျ့ဖွဈနသေညျ။ ပုံ့ပုံ့အား ကုတငျပျေါမှထခိုငျးကာ ဖငျပွောငျနှငျ့ ရခြေိုးရာနရော ရစေညျနားသို့ချေါသှားသညျ။ ပုံ့ပုံ့တို့ ခွံထဲတှငျပငျဖွဈသညျ။ သှပျမြားဖွငျ့ကာထားသျောလညျး အောကျခွကေ လှတျနသေဖွငျ့ခွထေောကျကိုတော့မွငျရသညျ။ ရစေညျးနားရောကျမှကွညျ့လိုကျရာ ဘေးအိမျမှ တဏှာရူးကောငျအေးမောငျမှနျး သိလိုကျရသညျ။ ပုံ့ပုံ့ ရှကျစိတျကွောငျ့မကျြနှာမြားနီမွနျးနသေညျ။ “မရှကျပါနဲ့ ပုံ့ရယျ… ကို က ပုံ့ကို ဟိုးအရငျထဲက စိတျထဲမှာ ကွိတျလိုးနတောပါကှယျ ဟဲဟဲ”ဆိုပွီး.. ပုဆိုးကွီးအား ပုံကခနဲ ခြှတျခလြိုကျသညျ။
အလို…. ၈လကျမနီးပါးရှညျသညျ့လီးကွီးမှာ ဖုပိတျတှနှေငျ့ အစိအစိတှကေောပါသေးသညျ။ လုံးပတျမှာ ကလေး လကျသီးစုတျ လောကျရှိသညျ။ လီးကွီးကိုကွညျ့နရေငျခုနက အထှတျအထိတျရောကျနသေော ကာမစိတျသညျ ဗွနျးခနဲကှဲကာ စောကျဖုတျထဲမှ အရညျမြားစိမျ့ထှကျလာသညျ။ အေးမောငျသညျ လိုးနကေကြောငျဖွဈသညျ့အတှကျ ပုံ့ပုံ့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီကိုသိသညျ။ သို့ရာတှငျ တကျမလိုးသေးပေ။ ပုံ့ပုံ့အားရစေညျပျေါသို့မတငျလိုကျသညျ။ ရစေညျမှာ ခါးတဈရပျပဲရှိသညျ့အပွငျ သဈသားအဖုံး ဖုံးထားသညျ။ ရစေညျပျေါတှငျကားကားလေး တဈတီတူးလိုဖွဈနသေော ပုံ့ပုံ့အား ကွညျ့နေ၇ငျး လီးကွီးကို စောကျဖုတျ ထိပျဝတှငျ တလေို့ကျသညျ။ လီးထိပျဖြားကို စိုစှတျစှတျဖွဈသှားသော စောကျဖုတျအထိအတှကွေောငျ့ လီးကွီးမှာ ပိုလို့ကွီးလာသညျ။ ပုံ့ပုံ့ စောကျဖုတျကွီးအား လကျညိုးနှငျ့လကျလခယျ၂ခုပေါငျးကာ ဖွဲပွီး စောကျစိတညျ့တညျ့တှငျလီးကိုတပေ့ေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ တှငျ ပုံ့ပုံ့၏ စအိုအဝတှငျ လကျမဖွငျ့ပှတျပေးနလေိုကျသညျ။ ပုံ့ပုံ့ ခုနကမှ အထှဋျအထိပျရောကျထားသော ကာမစိတျတို့သညျ အစိ ကိုလာထိသော လီးကွီးနှငျ့ ဖငျဝသို့ ပှတျသပျမှုကွောငျ့ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရဖွဈနမေိသညျ။
ပုံ့ပုံ့ကိုယျတိုငျမသိပမေယျ့ ဖငျကွီးကော့ ကာ ကော့ကာဖွငျ့ လီးကွီးကိုတောငျ့တနသေညျ။ မညျသို့ပငျ ပုံ့ပုံ့လီးကိုတောငျ့တတောငျ့တ အေးမောငျကတော့ ကွောငျကကွှကျ ကို ကစားသလို ကစားးနသေညျ။ လီးကွီးကို အစိထိပျမှဖယျပွီး စောကျဖုတျထဲဖွညျးဖွညျးခငျြးထညျ့လိုကျသညျ။ “ဗွဈ..ဗွဈ ..စှပျ”ခနဲ မွညျသှားသညျ။ ဒဈဖြားအထိဝငျအောငျသှငျးပွီးမှ စှပျခနဲ ပွနျထုတျလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ပုံ့ပုံ့ လူစိတျပြောကျသှားသညျ။ ပကျလကျလှနျနရောမှ ထပွီး ရစေညျပျေါမှောကျခလြိုကျသညျ။ ခွေ၂ခြောငျးကိုကားပေးထားသညျ။ ပါးစပျမှလညျး “လိုးပါ အကို အေးမောငျလိုးပါ…အကို့လီးကွီးနဲ့ ကမြ စောကျဖုတျထဲပွဲအောငျလိုးပါ အကို” ဟုပွောရငျး လီးကွီးကိုအတငျးဆုပျကိုငျကာ စောကျ ဖုတျထဲ ထိုးထညျ့နသေညျ။ ထိုစဉျအေးမောငျမှ ပုံ့ပုံ့တငျပါးအား ဖွနျးခနဲရိုကျခလြိုကျသညျ။ “စောကျကောငျမတျောတျော ယှနတော လား..အဲ့လောကျလီးဆာနတောလား ဟေ။ နငျက အပကျြမလား စောကျကောငျမ”ဟု ညဈညဈညမျးညမျး မိုကျရိုငျးစှာပွောသညျ။ သာမနျအခြိနျတှငျ အိနွေ်ဒသိက်ခာအပွညျ့ဖွငျ့နခေဲ့သော ပုံ့ပုံ့မှာ လီးသာသခငျ လီးသာဘုရားဖွဈနသေဖွငျ့ “ဟုတျပါတယျ..အကို လိုးပေးပါ ကမြတောငျးပနျပါတယျအကို.. ဟီး..ဟီး..”ဆိုပွီးငိုလတေော့သညျ။ ရှကျစိတျကော လိငျစိတျပါ ငယျထိပျတကျစောငျ့နေ သဖွငျ့ လီးတရူးမဖွဈနလေတေော့သညျ။
”အေး ဟုတျပွီ နငျ့ကိုငါ ဖငျအရငျခမြယျ။ ပွီးရငျစောကျဖုတျလိုးမယျ။ ဖငျအရငျမခရြ ရငျမလိုးတော့ဘူး။ကနြေပျလား။မကနြေပျလညျးငါပွနျမယျ”ဟု အေးမောငျသညျ အပိုငျပွောသညျ။ ပုံ့ပုံ့လနျ့သှာသညျ။ လကျသနျး တောငျမဝငျသော သူမ စအိုပေါကျထဲသို့ ၈လကျမခနျ့ရှိသော အအေးပုလငျးဖငျခနျ့ ကွီးသော လီးကွီးဝငျမညျ့အကွောငျးတှေးရငျ ကြောခမျြးသှားသညျ။ သို့ရာတှငျစောကျဖုတျကလညျး အရညျတှတေရစပျကနြသေညျ။ အလိုးအရမျးခံခငျြနသေညျ။ မရတော့ ပေ….”ဟုတျကဲ့ပါ အကို လိုးပါ ဖငျကှဲပါစေ လိုးစမျးပါ..။အကို လိုးလိုး””ဟု ဆိုကာ လီးကိုငျပွီး ဖငျဝတပေ့ေးသညျ။ အေးမောငျ လညျး…. “အေး အဲ့တာဆိုထစမျးကောငျမ”ဟုပွောပွီး ရစေညျထဲမ ရတေဈခှကျခပျကာ လီးနှငျ့ ပုံ့ပုံ့ဖငျအားရနေဲ့ပဲသညျ။ပွီးနောကျ ရစေညျပျေါသို့ နဂိုအနထေားတိုငျးပွနျထားသညျ။ ဘေးမှ ဆပျပွာတုံးယူကာလီးကိုပှတျသပျရငျး ပုံ့ပုံ့ စအိုဝကိုပါ ဆပျပွာတိုကျ ပေးသညျ။ထို့နောကျတှငျ…ဖွညျးဖွညျးခငျြးထညျ့သညျ မဝငျ.. ဆပျပွာတှေ အမွုပျထနတောတောငျမနညျးထဲ့ရသညျ။ ခါးကိုနှဲ့ကာ ထညျ့သညျ။ ဒဈဖြားလေးဝငျသှားသညျပွနျထှကျလာသညျ။ နောကျဆုံးအားထညျ့ကာ ဖိထညျ့လိုကျသညျ။
”အားးးးးးးးးးးးးးးးး”ဟူသောအျောသံကွီးထှကျလာသညျ။အေးမောငျအမွနျပါးစပျကိုပိတျလိုကျသဖွငျ့ ဝူးးးခနဲဖွဈသှားသညျ။ သို့ရာတှငျအိမျထဲမှာ ၂ယောကျက ကွားသှားသညျ။” ဘာဖွဈတာလညျး ညီမလေး..” “စိတျမပူနဲ့ ကိုကွီး.. ဟိုဘကျအိမျက အောကာ ဖှငျ့တာနမေယျ.. အမွဲ အသံနဲ့ဖှငျ့နကြေ လိုးစရာရှိတာလိုး” “အငျးအငျး ညီမလေး..”ဆိုပွီး ၂ယောကျသားဆကျလိုးနကွေသညျ။ ရကေပွငျမှာလညျး… ပုံ့ပုံ့ဖငျထဲ လီးက ၂လကျမလောကျဝငျနပွေီ..ပုံ့ပုံ့ဖငျကွီးထဲ စို့ရိုကျထားသလိုခံစားရသညျ။ အေးမောငျမှာ လညျး တငျးကွပျသော ကွှကျသားတှကွေောငျ့ဆကျထိုးထညျ့မရ ဆှဲထုတျမရဖွဈနသေညျ။ ကွံရမှာသညျ့အဆုံး ရစေညျအား ကိုငျ ကာ အားနဲ့ဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။ “အူး…’ခနဲအျောကာ ပုံ့ပုံ့တဈယောကျဖငျကှဲသှားသညျ။ သှေးတှကေလြာသညျ။ ဖငျကှဲသှား သလို စောကျဖုတျမှ အရညျမြားလညျးကလြာသညျ။ ပုံပုံနောကျ၂ခြီလောကျထပျပွီးသှားသညျ။ အေးမောငျလညျး ဖငျထဲမှလီးကို ဆှဲထုတျကာ စောကျဖုတျထဲသို့ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။
အရညျမြား ရှဲစိုနသေောကွောငျ့ ခြောခြောခြူခြူဝငျသှားသျောလညျး ကွီးထှား တုတျခိုငျသော လီးကွီးကွောငျ့ စောကျဖုတျနံရံသားမြား ပှနျးကုနျသညျ။ လီးကွီးမှာ သားအိမျကိုလညျးသှားသှားထောကျနသေညျ။ ကာမအရသာ အပွညျ့အဝခံစားရငျး ပုံ့ပုံ့တဈယောကျ တဈခြီထပျပွီးသှားပွနျသညျ။ စောကျဖုတျလညျး ထပျကှဲကာ သှေးမြားကြ လာသညျ။ သှေးမြားနှငျ့ စောကျ၇ညျတို့ပေါငျးကာ ညှီစို့စို့အနံ့သညျ ရကေပွငျဝယျ ထောငျးခနဲ ထနသေညျ။ ထိုသို့ဖွငျ့ အခကျြ၃၀လောကျဆောငျ့ပွီးခြိနျဝယျ ပုံ့ပုံ့လညျး ၇ခြီလောကျပွီးကာ မြော့မြော့ပဲကနျြတော့သညျ။ အေးမောငျလညျး ပီးခငျြလာ သောကွောငျ့ ပြော့ခှနေသေော ပုံ့ပုံ့အား ရကေပွငျပျေါသို့လှဲခပြွီး သုတျရညျမြားအား မကျြနှာပျေါသို့ပနျးခလြိုကျသညျ။ ပုံ့ပုံ့မှာ လုံးဝ မလှုပျနိုငျတော့ပေ။ “ပုံ့လေး..ကိုနောကျနတေို့ငျးလာလိုးပေးမယျနော.ျ.. ခုတော့သှားဦးမယျ”ဟုဆိုကာ လိုးကပဈ(လိုးပွီး ပဈထား)လုပျခဲ့သညျ။ ပုံ့ပုံ့မှာ သုတျရညျပူမြားမကျြနှာနှငျ့ရငျဘတျပျေါတှငျ အပွညျ့…ပေါငျတဈလြောကျနှငျ့ရကေပငျတှငျလညျး သှေးနှငျ့သုကျရညျတို့ ရောအိုငျထှနျးကာ အိပျပြျောသှားပါတော့သညျ…………….။ ။
ခွေးဖြစ်တဲ့နေ့ (အစ အဆုံး)
သူများစာအုပ်တွေတင်နေတာများပြီ ကိုယ့်အကြောင်းလေးပဲ ကိုယ်ပြောမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကပေါ့.။ဖြစ်တာ ပြောပါ တယ်။ ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ဝမ်းကွဲပေါ့။ အသက်က သိပ်မကွာဘူး။ သူက အဲ့တုန်းက ၁၀တန်း။ ကျနော်က တက္ကသိုလ်တက်နေတာပေါ့။ သူ့အဖေက မလေးမှာအလုပ်လုပ်နေတာ။ အမေနဲ့ ၂ယောက်ထဲနေရတာပေါ့။ ကျနော်က ကျနော့် ညီမကိုအမြဲ စာပြပေးနေကျ။ သူ ၃ တန်းလောက်ထဲကစပြီး ၁၀တန်းထိ ကျနော်ပဲ ကျူရှင်ဆရာဖြစ်ခဲ့တာ။ ၁၀တန်းကျတော့ သူ ကျူရှုင်တွေဘာတွေတက်ခွင့်ရတယ်။ကျတော်က ဂိုက်ပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့နေ့က သီတင်းကျွတ်။ ကျောင်းဆယ်ရက်ပိတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျူရှင်က စာမေးပွဲဖြေရမယ်ဆိုတော့ သူ့ကို ညလုံးပေါက် သင်ရတာပေါ့။ ကျတော်လည်း အဒေါ့်အိမ်သွားအိပ်ရတာ ပေါ့။
သီတင်းကျွတ်ကာလဆိုတာ ၁၀တန်းကျောင်းသားတိုင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ပဲလေ။ စာတွေကလည်းများ ဖိအားက လည်းများဆိုတော့ အကုန်ကြိူးစားနေတဲ့အချိန်။ အဲ့နေ့ညက အမျိုးတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်တော့ သူ့အမေက သွားကူလုပ်ပေး တယ်။ အိမ်မှာ သူနဲ့ကျနော်၂ယောက်တည်း။ အဲ့အချိန်အထိ စိတ်ရိုင်းတွေမဝင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကမေးတယ်။ ‘ကိုကြီး မင်္ဂလာဆောင်ကြရင် bioထဲကလို လုပ်တာပေါ့နော် ဟီဟီ’ဆိုပြီး။ အဲ့စကားလည်းကြားရော ညီတော်မောင်က ထောင်းခနဲမတ်လာ ကော။ ကံဆိုးတာက အတွင်းခံဝတ်မလာမိဘူး။ ပုဆိုးကြီးနဲ့ ထိုင်ရာကမထပဲနဲ့ ခေါင်းပိတ်ခေါက်လိုက်။ ဒီကလေးမ ကလေးလိုမနေ ဘူး ဆိုပြီး ဆူပြီး စာလုပ်ခိုင်းထားပြီး သေးပေါက်ဖို့နောက်ဖေးထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့တော့မှ ဒုက္ခရောက်တာ သေးပေါက်ပြီးပေမယ့် လီးတောင်တာက မကျသေးဘူး။
ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့။ အိမ်သာဘေးက ရေကန်ဘေးမှာလှမ်းထားတဲ့ စကပ်လေးတွေလည်းမြင်ရော ခွေးစိတ်က အဲ့တော့မှပေါက်လာ တော့တာ။ စကပ်လေးတစ်ထည်ကို အသာရုတ်ပြီးတော့ လီးကြီးကို ပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ ဂွင်းတိုက်နေမိတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့လုပ်မိ မှန်းလည်းမသိဘူး။ အညို့ခံထားရသလိုပဲဗျာ။ အဲ့ဒီအချိန်ဘာလာတာားတားရမယ်မထင်ဘူး။ လူစိတ်တွေလည်းပျောက်သွားတယ်။ဂွင်းတိုက်လို့ သိပ်မကြာပါဘူး ၈ချက် ၁၀ ချက်လောက် ဆောင့်ပြီးပြီးသွားတယ်။ ပြီးသွားတော့မှ လူစိတ်ပြန်ဝင်လာရော။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးမှာလည်း လရည်တွေ ပေကုန်ရော။ အဲ့တော့မှခေါင်းပူတာ။ အဒေါ်က ယောကျာ်းမရှိတော့ပေမယ့် လရ ည်နံ့တော့ သိမှာလေ။ ညီမရဲ့ အတွင်းခံမှာပေနေတဲ့လရည်တွေကို အမြန်ရေလောင်းပြီးဆေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ခပ်တည်တည် ပဲ အိမ်ရှေ့စာသင်ဝိုင်းကို လာပြီး စာထိုင်မေးတယ်။
ညီမလေးက တော့ပြုံးစိစိနဲ့ ဘာကိုသဘောကျနေလည်းမသိဘူး။ အဲ့အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်မလေးတွေက အမြဲအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ သိပ်သတိမထားမိဘူး စာဆက်သင်နေုလိုက်တယ်။ ည၁၀နာရီလောက်ကျတော့ အဒေါ်ကပြန်ရောက်လာတယ်။ အဒေါ်ပြန် ရောက်လာတာနဲ့ ကျနော်လည်းစက်ဘီးလေးယူပြီးပြန်လာတယ်။ နောက်နေ့ ညနေ စာသွားသင်တော့မှ ညီမက ‘ကိုကြီး…လျော် တာပြောင်လည်းမပြောင်ဘူ်းခိ’ဆိုပြီး စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ မေးတယ်။ ကျနော်လည်း ကြက်သီးမွှေးညှုင်းတွေထပြီး ခေါင်းတွေကြီးသွား တယ်။ ဒါပေမယ့် လူကြီးဆိုတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ။ ‘အော် နင့်ဘောင်းဘီလား အေးလေ ငါရေအိမ်က အထွက်လက်ဆေးရင်းနဲ့ အဝတ်တန်းတိုက်မိတာ ပြုတ်ကျသွားလို့ ပြန်ဆေးပေးထားတာ’ (ယုတ္တိမရှိတာတော့ သိတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ ပါးစပ်ထဲရှိတာ လျောက်ပြောရတာပဲ။)
‘ဒါဆို အနံ့တွေက ဘာနဲ့တွေတုန်း ဟွန်း ကိုကြီးနော် မေမေနဲ့တိုင်ပြောမယ်’ဆိုပြီး ထကောက်ပါလေရော။ အဲ့တော့ မှပြေးပြီး ကိုယ့် ညီမကိုယ်တောင်းပန်၇တာ။ ညီမလေးရယ် ကိုကြိးမှားပါတယ် စိတ်ကထ နေလို့ ဂွင်းတိုက်မိတာပါကွာ နော် မတိုင်ပါနဲ့ ညီမလေး ကလိမ္မာပါတယ်ဆိုပြီး ပခုံးလေးကိုင်ရင်း ပြောတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက အူကြောင်ကြောင်ပြန်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ‘ဂွင်း တိုက်တယ်ဆိုတာ ဘာကြီးလည်း ကိုကြီး’တဲ့။ အဲ့တော့မှ စကားလွန်သွားမှန်းသိတယ်။ သူက အဖြူထည်လေးလေ။ဘာမှသိတာ မဟုတ်ဘူး။ ‘ဟီ..ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ လာထိုင်စာလုပ်မယ်’လို့ပြောပေမယ့် သကောင့်သားမက- ‘ ဟင့်အင်း မရဘူး။ပြောပြရင် ပြောပြမပြောပြရင် မေမေနဲ့တိုင်ပြောနဲ့ဆိုပြီးရစ်ပါလေရော။’
ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ရှင်းပြလိုက်၇တယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း စိတ်ရိုင်းဝင်သွားတာဖြစ်ကြောင်း။ အဒေါ်နဲ့မတိုင်ဖို့ကောပြောရပါလေရော။ အဲ့တော့မှ ပိုဆိုးကော။ဘယ်လိုလည်းလုပ်ပြတဲ့။ အဲ့တော့မှ ထိန်းထားတဲ့စိတ်က ထလာ ရော။ ကိုယ့်ညီမကိုယ်ဆိုပေမယ့် ၂ယောက်တည်း အိမ်ထဲမှာ။ ပြောနေတာကလည်း စိတ်ထစရာတွေဆိုတော့။ လာအခန်းထဲလာ ဆိုပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီး ပုဆိုးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချွတ်ပြတယ်။ အဲ့မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီ မချွတ်ရသေး။(ဒီနေ့ကျတော့ ဝတ်လာမိတယ် )လီးက တောင်နေတော့ ဖောင်းဖုဖုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲ့တော့ ညီမက ဆက်ပြောတယ်။ လုပ်ပြလေတဲ့။ ဟုတ် ပြီဆိုပြီး အတွင်းခံကို ချွတ်လည်ချွတ်လိုက်ရော ရမ်းတမ်းတမ်းကြီးထွက်ချလာပါလေတယ်။ ဟယ်..အကြီးကြီးပဲတဲ့။ ကျနော့်လီး ကသိပ်တော့မကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူ့အတွက်တော့ ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့လီးလေ။ သူရှက်သွားတယ်။
တော်ပြီကိုကြီး ပြန်ဝတ်တော့ဆိုပြီး။ ကုတင်ပေါ် အရုပ်ကြိုးပြတ်ုထိုင်ကျသွားတယ်။ အဲ့တော့မှ လူက ရွဲ့ချင်လာတာနဲ့။ ဟဲ့ကြည့် မယ်ဆိုလာလေ ဒီမှာကြည့် ဂွင်းတိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီလို လီးကို ဒီလိုလေး ဒီလိုလေးဆိုပြီး သူ့မျက်နှာနား သွားပြီးလုပ်ပြတယ်။ သူ လည်း ပထမတော့ ရှက်နေသေးတယ်။နောက်ကျတော့ ငိုက်ကျနေတဲ့ခေါင်းက မော့ကြည့်ပြီးတော့ ဇတ်ခနဲ့ ကျနော့်လီးကို ပစ်ကိုက် ပါလေရော။ အဲ့တစ်ခုကျနော်မပြောရသေးဘူး သူက ငယ်ငယ်လေးထဲက အသေကိုက်တာ။ရန်ဖြစ်ရင်လည်းကိုက်တယ်။ စချင် ရင်လည်းကိုက်တယ်။အခုက သူ စချင်လို့ပါ။လီးကို ဖြတ်ကိုက်တာ အား ခနဲဖြစ်သွားတယ်။နောက်တော့မှ ကိုက်ချင်ဦးဆိုပြီး ခေါင်း နောက်က ကိုင်ပြီးဆေင့်ထည့်လိက်တာ အာခေါင်ကိုထောက်သွားပြီးဝူးဝူးဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့တော့မှ လူကို ရိုက်ရောဝူးဝူးနဲ့။
ဘယ်ရမလည်း ငါ့ကိုကိုက်တဲ့ ဟာမလေးဆိုပြီး ပါးစပ်ကိုလိုးလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ လျာလေးတွေနဲ့ လီးနဲ့ပွတ်သတ်သွားတိုင်းလူက ပြီး ချင်သလိုလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ ဆောင့်ပေးနေလိုက်တာ ၅ ချက်၆ချက်လောက်နဲ့ လ ရည်တွေက သူ့ပါးစပ် အပြည့်ထွ့က်သွားပါလေတော့တယ်။ ညီမလေးပါးစပ်ထဲမှာ သုတ်ရည်တွေဝင်သွားကော ပျို့ခနဲ့ဖြစ်ပြီး ညီမ လေးဝူးဝူးဖြစ်ကော။ အဲ့တာနဲ့သူ့ပါးစပ်ထဲကလီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဘေးနားက ရေဘူးကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တယ်။ မျိုချဆိုပြီး။ မျိုချ ခိုင်းတယ်။ညီမလေးလည်း မထူးဇာတ်ခင်းတယ်ထင်ပါရဲ့ မျိုချလိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းဘေးကနေကျလာတဲ့သုတ်တွေကိုတော့ ကျ နော့် လက်ဖဝါးနဲ့ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကလည်း ကျနော့် ညီမလေးရဲ့ နို့အုံလေး၂ခုကို အပေါ်က မိုးကြည့်နေသလို ကျနော့် ရဲ့ လီးရှည်ရှည်ကြီးကို ညီမလေးကလည်း မခို့တရို့ပြန်ကြည့်နေတယ်။ ၁ချီပြီးသွားပြီဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ညီမရဲ့ပါးစပ်ကို ဆောင့်လိုး ထားတာဆိုတဲ့ အသိက ကျနော့်ကို တန်းခနဲ တန်းခနဲ ပြန်ထောင်မတ်လာစေတယ်။
နှစ်ယောက်သား ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးခင်မှာ သူ့ရဲ့ ကုတင်ခေါင်းရင်းက နာရီက ၅နာရီထိုးပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အသံ၅ချက်မြည်ပြီး အချက်ပေးတယ်။ အဲ့တော့မှ သူက ‘ဟာ.. ကိုကြီး သမီး ၅နာရီကျရင် မြန်မာစာ ကိုကြီးဆီမှာ ဖြေရမယ်လေ’ဆိုပြီး ထပြေးဖို့ပြင်တယ်။ ကုတင်ပေါ်က သူထထချင်း ကျနော် လည်း သူ့ချိုင်းကနေမပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ပွေ့တင်လိုက်တယ်။ ‘ ဒီလိုရမလား ညီမလေးရာ ‘ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ထမိန်ကိုဖြည်ပြီး မချွတ်ပဲနဲ့ ခေါင်းဝင်လျိုလိုက်တယ်။ အဲ့တော့မှတွေ့တာ မနေ့က အတွင်းခံလေး သူဝတ်ထားတာပဲ။ အတွင်းခံကလည်း စောက်ဖုတ်က ထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေနဲ့စိုရွဲနေတာပဲ။ ကျနော်လည်း အချိန်မဆိုင်းပဲ ဆီးခုံလေးကို ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေ တယ်။ အတွင်းခံကို မချွတ်သေးပဲညာဖက်လက်ကလည်း စောက်ဖုတ် အက်ကွဲကြောင်းလေး ကို လက်လေးချောင်းနဲ့ အထက်အောက် စုန်ဆန် ဆွဲပေးနေလိုက်တယ်။
သူ(မ)ရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကိုလည်း ပါးစပ်နဲ့စုတ်ရင်း လျာနဲ့ယက်ရင်းပေါ့။ ၂မိနစ်လောက်လုပ်ပေးနေရင်း အားမရတာနဲ့ထမိန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ညီမလေးရဲ့ မျက်နာဟာ နီမြန်းနေတာပါပဲ။ ညီမလေးရဲ့ အတွင်းခံကို အသာချွတ်လိုက်ပြီး လျာနဲ့ အဖုတ်ထိပ်က အစိလေးကို မထိတထိလေးတို့ပေးလိုက်ရော ‘ကိုကြီး ဘာတွေလုပ်နေတာ လည်းး..အား…ဘုန်းတွေနိမ့်ကုန်တော့မှာကွာ…..အင်း’ဆိုပြီး အသံမျိုးစုံထွက်လာပါရော။ အစိလေးကို စုပ်လိုက် အကွဲကြောင်းလေးကို လျာလေးနဲ့လျက်လိုက်လုပ်ရင်း လက်ကလည်း တင်ပါးနှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဖြစ်ညှစ်ပေးနေတာပေါ့။ ကောင်မလေး ထွန့်ထွန့်လူးရင်းနဲ့ ၃မိနစ်လောက်နဲ့ အရည်တွေ ဒလဟောထွက်ကျလာတော့တယ်။ ”အား..ပြီးပီ ကိုကြီး အ အ”ဆိုပြီးတော့ အော်ရင်း ကျနော့်ကျောကုန်းကို ကုတ်ခြစ် လိုက်ပါတော့တယ်။
“အင်း…အား…ကောင်းတယ်..။ကိုကြီး ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်း အိုး” ဒေါ်ပုံ့ပုံ့ အိမ်ရှေ့တံခါးက အဝင် ကြားလိုက်ရသောအသံ ဖြစ်သည်။ အသံကြားကြားချင်း ခေါင်းတွေခဲသွားသည်။ သမီးရဲ့ အခန်းထဲက လာသည့်အသံကြောင့် ကမ္ဘာကြီးလည်နေတာပိုမြန် သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ဒေါ်ပုံ့ပုံ့ အကြောင်းပြောပါဦးမည်။ ဒေါ်ပုံ့ပုံ့သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ၁၇နှစ်ထဲက ချစ်သူနှင့်လိုက် ပြေးးပြီး အိမ်ထောင်ကျလာခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်၁၈မှာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး နွယ်ချည်ကို မွေးသည်။ ပုံ့ပုံ့တို့ လင်မယားမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျသောကြောင့် အဆင်မပြေကြပေ။ တစ်ပတ် ၄ရက်လောက်က ရန်သတ်နေကျ ပင်။ ယောကျာ်းကောမိန်းကကော ၂ဖက်မိဘ သဘောမတူသောကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲကို ဒူပေဒန်ပေခံနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့လင်မယားသည် အိမ်ထောင်သက်၁နှစ်မှာပင် ကလေးတစ်ယောက်ရသည်။
ဒီကလေးမလေး သူတို့လင်မယား ဖြစ်သမျှပြသနာတိုင်းအားပြေလည်စေသည်။ ကွဲဖို့ကွာဖို့အထိဖြစ်လာတိုင်း သမီးမျက်နှာပြန်ကြည့်နေရသောကြောင့် နွယ်ချည်ဟု ပုံ့ပုံ့ကပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးမို့တုန်နေအောင်ချစ်သည်။ သူဌေးသားဘဝကနေ ကန်ချခံလိုက်ရ သော ယောက်ျားဖြစ်သူတောင်မှ သမီးရှေ့ရေးအတွက် နွယ်ချည်၈တန်းကတည်းက နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်ကြမ်းလုပ်နေသည်။ အခုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒေါသတွေမိုးပြိုသလို ဒေါ်ပုံ့တစ်ယောက် ပေါက်ကွဲရသည်။ ငါ့သမီးလေး လိမ္မာလှ လိမ္မာလှနဲ့ အခန်းထဲမှာ ဘယ်ကအကောင်နဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းနေသည်မသိ။ ဒေါ်ပုံ့ ထမိန်တိုတိုဝတ်ကာ အိမ်ထဲသို့ဝင်ချလာသည်။ အခန်နားအရောက်တွင် “အား ပြီးပြီ ကိုကြီး ပြီးပြီ “ဟူသော သမီး၏ ဏှာသံပါပါ စကားကိုကြားလိုက်ရသည်။ ဒေါ်ပုံ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသောင်းကျန်းပစ်ချင် သည်။ သို့ရာတွင် အရင်ဆုံး သူတို့မရိပ်မိအောင် သမီးအခန်းနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက် သူမတို့လင်မယား အခန်းထဲမှနေကာ ထရံ ပေါက်ချိုးပြီး ချောင်းကြည့်လေသည်။ “ဟာ.. ဒီကောင် လေး… “ဒေါ်ပုံ့ စွံ့အသွားသည်။ ခုနက ဖြစ်နေသောဒေါသတွေလည်း ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်သွားသည်။
သားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ယုံကြည်ချစ်ခင်ရသော တူတော်မောင်က မိမိ၏ ချစ်လှစွာ သောသမီးလေးအား စောက်ဖုတ်ဖြဲကာ လျက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းကိုမမြင်ခင်က ဖြစ်ခဲ့သော ဒေါသတွေပျောက်ပြီး အားငယ်ခြင်း လောကကြီးအပေါ်အယုံကြည်နည်းခြင်း မိမိ ချစ်ခင်ယုံကြည်သူတို့က သစ္စာဖောက်ခံရသော ခံစားချက်များ ဖြင့် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်မိနေသည်။။ ထိုစဉ် တူတော်မောင် ကျော်နိုင်ထံမှ ” ညီမလေး ပေါင်ကားလိုက် ညီမလေးကို ကိုကြီးလိုး တော့မယ်”ဟူသော တစ်တစ်ခွခွ စကားသံကြီးအား ကြားလိုက်ရစဉ် ဒေါ်ပုံ့တစ်ယောက် စောက်ဖုတ်ကြီးဖောင်းကြွလာလေ တော့သည်။ ဒေါ်ပုံ့သည် သွေးဆုံးနေသော အဖွားကြီးတစ်ယောက်မဟုတ် ၁၈နှစ်မှာ ကလေးရပြီ ၃နှစ်လောက် လိင်မဆက်ဆံရ သေးသော ငယ်သွေးမကုန်သေးသော မိန်းမတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။ သူမအသက်မှာ ၃၂နှစ်သာရှိသေးသည်။ ဒီစိတ်တွေ ကုန်သေးသည်မဟုတ်။ အခုလည်း မိမိသမီးကို မိမိတူက ပေါင်ဖြဲကာ လိုးမည့်အကြောင့်ကိုနားနဲ့ဆတ်ဆတ်ကြားပြီးပြီးချင်း အဖုတ်မှာ ကြွလာသည်။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ရှက်မိသည်။ မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေရင်း သမီးလေး၏ အဖုတ်လေးထဲသို့ တူ တော်မောင်က လီးထိပ်လေးကို တင်ရင်း စွပ်ခနဲထည့်လိုက်သည်။ သမီး၏ ဖင်လေးကော့တက်လာကာ “အ”ဟူသောအသံလေး ထွက်လာသည်။
တူတော်မောင်က “ညီမလေး နာလား နာရင်မလုပ်တော့ဘူးနော်”ဆိုတော့ သမီးက “ရပါတယ်ကိုကြီးရယ် လိုး သာလိုးပါ” တဲ့။ ဒီသမီးတော်တော်ယွသည။် တွေ့ဦးမယ် ပြီးမှ တတောင်လောက်ရှိတဲ့သခွားသီးထုိးထည့်ဦးမယ်။ အခုတော့ ဆက်ကြည့်နေမိသည်။ လီးထိပ်ဖျား စိုက်ဝင်နေသော သမီးအဖုတ်အား ကြည့်နေရင်း ဒေါ်ပုံ့ အဖုတ်ကြီးမှာ အတွင်းခံနှင့်မဆန့် တော့အောင်ဖောင်းကြွလာသည်။ ဒေါ်ပုံ့ မြင်ကွင်းကို မျက်တောင်မခတ်ကြည့်ရင်း ထမိန်ကိုချွတ်လိုက်သည်။ ဒေါ်ပုံ့ ထမိန်ချွတ် ပုံမှာရယ်စရာတော့ကောင်းသည်။ ကြည့်ပါလေ..ကုတင်ပေါ်မှ နေကာ ထရံပေါက်မှနေပြီး လေးဖက်ထောင်ချောင်းကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးဖောင်းလာသဖြင့် ထမိန်ချွတ်တော့လည်း လက်နောက်ပစ်ပြီး ထမိန်ကို ဆွဲချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ် ပုံ့မှာ တခြားမိန်းမတွေလို ပိန်ညောင်ရိုးမ မဟုတ်ပေ။ စည်ပိုင်းကြီးလည်းမဟုတ်ပေ။ ဆိုဒ်က ၃၁.၂၄.၃၆ ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ထမိန် ချွတ်လိုက်သော် ဖင်လုံးကြီးကပြူးခနဲပေါ်လာသည်။ အတွင်းခံကိုချွတ်တော့ အတော်လက်ဝင်နေသည်။ လက်ဝင်တာပေါ့ ဖင်ကြီး တဲ့မိန်းမပဲ ပုံမှန်ချွတ်တာတောင်မနည်းချွတ်ရတာ။ လေးဘက်ကုန်းအနေထားကို မပြင်ပဲနဲ့ မရရအောင်ချွတ်နေတော့ ချွတ်မရဖြစ် နေသည်။ ဖင်က ကုန်းလိုက် ကွလိုက်နဲ့ ဒေါ်ပုံ့တစ်ယောက်ဒုက္ခတွေ့နေတော့သည်။
ကံဆိုးသည်မှာ ဒေါ်ပုံ့ဒေါသတကြီး အခန်းထဲဝင်လာစဉ်မေ့သွားသည်က ပြူတင်းးပေါက်တံခါးပိတ်ဖို့ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ပုံ့တို့ အိမ်ဘေးမှာ တစ်ကိုယ်တည်းသမား လူပျိုကြီး အေးမောင် နေသည်။ အမှန်ကအေးမောင်သည် လူပျိုကြီးမဟုတ် လူပြိုကြီးဖြစ်သည်။ ဏှာအလွန်ထန်သည်။ ညည ဖာများခေါ်ခေါ်ချနေကြဖြစ်သည်။ ဏှာကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ရင် အလွန်အကြံကြီးသည်။ ဒေါ်ပုံ့တို မိသားစု ဘေးအိမ်ကို ပြောင်းလာသည် သိသိချင်းသူ၏ ၂ထပ်အိမ်ကို အပေါ်ထပ်ပြူတင်းပေါက်များအား တန်ဖိုးကြီး တစ်ဖက်မြင် မှန်များပြောင်းတပ်ထားသည်။ နွယ်ချည်ရေချိုးတိုင်းချောင်းနေကြဖြစ်သည်။ ဒေါ်ပုံ့အခန်းကိုလည်းသူအိမ်ပေါ်ထပ် တက်ကြည့် ရင်မြင်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်ပုံ့မှာ ပြူတင်းတံခါးအား ဂရုတစိုက်ပိတ်လေ့ရှိသည်။ ကုတင်ဘေးတွင် ပြူတင်းပေါက်ရှိသည်။ ပြူတင်းပေါက်တွင် အေးမောင်မျက်လုံးရှိသည် ဟူသော အသိကြောင့် အလွန်ပူသော ညများမှာပင် တံခါးဖွင့်မအိပ်ရဲ။ ရေမိုးချိုးပြီး ရင်လည်း အဝတ်အစားလဲဖို့တံခါးအရင်ပိတ်ရသည်။ အိမ်က ငွေကြေးခက်ခဲသောကြောင့် ခြံထဲမှရေစည်ကို သွပ်လေးသာကာ ထားနိုင်သည်။ ယခုတော့ ပြူတင်းတံခါးပိတ်ဖို့မေ့သည့်အပြင် ပြူတင်းပေါက်ဖက်သို့ ဖင်ကြီးထောင်ကာ ကော့လိုက် ကုန်းလိုက်နဲ့ အေးမောင် အကြိုက်ဖြစ်နေတော့သည်။
အေးမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ဘိုင်နိုကူလာ ခေါ် အဝေးကြည့်မှန်ဘီလူးကို သင်္ဘောတက်ထဲကဝယ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ဘီလူးတစ်လက်နဲ့ အေးမောင် အခုတော့ ဒေါ်ပုံ့ရဲ့ အောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်း အလှကို ခံစားရင်း ဂွင်းတိုက်နေလေ တော့သည်။ ဒေါ်ပုံ့တစ်ယောက် ဖင်တုံးကြီး ကော့ကာ လန်ကာနှင့် အတွင်းခံချွတ်နေတုန်း။ အနောက်မှ ပူပူနွေးနွေးအတံကြီးကို သွားစမ်းမိလေသည်။ လက်နောက်ပစ်ရင်း ထိုအတံကြီးအား ဖျစ်ကြည့်လိုက်ရာ တဒုတ်ဒုတ်နှင့်လှုပ်နေသည်။ ပုံ့ပုံ့တစ်ယောက် လည်း ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ လီးတံကြီးမှန်း သိလိုက်ကာ နောက်လှည့်ကြည့်ရန် အပြင် လက်အား ချိုးထားသည်။(လက်ချိုး သည်ဆိုမှာ လက်အနောက်ပစ်ကာ လှုပ်မရအောင် ပင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ယောကျာ်းလေးများ ငယ်စဉ်က အချင်းချင်းစရင်း နောက်ရင်းလုပ်ဖူးကြသည်- စကားချပ်) ပုံ့ပုံ့ ရုန်းလိုက်တိုင်း ရုန်းလိုက်တိုင်း လက်က အောင့်ခနဲ နာသည်။ သို့သော်လည်းမအော်ရဲ။
လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ လေးဘက်ကုန်းတာ အတော်ကြာသွားသဖြင့် ခွေကျသွားကာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ဘေးခန်းမှ သမီး၏ ” အား..အား.အ…ကောင်းတယ် အကို လိုးလိုး “ဟူသောအသံသည်လည်း နားထဲသို့ တောက်လျောက်ဝင်လာ နေသည်။ ထိုစဉ်မိမိ၏ တင်ပါးပေါ်သို့ လီးတန်ကြီးအား တင်ထားသည်ကိုသိလိုက်ရသည်။ အနောက်မှလူသည် ပုံပုံနားနားကပ်ပြီး “အော်ချင်အော်လိုက်လေ. . .မအော်ချင်ရင် လိုက်ခဲ့”ဟုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောသည်။ပုံပုံ့ဘာပြန်ဖြေ၇မှန်းမသိ။ ထိုလူမ.”လိုက်ခဲ့ မယ်ဆိုခေါင်းငြိတ်စမ်း.. .”ဟုပြောရင်း ပုံပုံ့၏လက်အား ဖိတွန်းလိုက်သည်။ နာကျင်လှသဖြင့် ခေါင်းကို တရစပ်ငြိတ်လိုက် မိသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ထိုသူသည် ပုံ့ပုံ့၏ အတွင်းခံကို အသာအယာချွတ်လိုက်သည်။ ပုံ့ပုံ့မှာ အပေါ်ပိုင်း ရင်ဖုံးအကျီင်္နှင့် အောက်ပိုင်း ဗလာဖင်ပြောင် စောက်မွှေးတစ်ထောင်ထောင်နှင့်ဖြစ်နေသည်။ ပုံ့ပုံ့အား ကုတင်ပေါ်မှထခိုင်းကာ ဖင်ပြောင်နှင့် ရေချိုးရာနေရာ ရေစည်နားသို့ခေါ်သွားသည်။ ပုံ့ပုံ့တို့ ခြံထဲတွင်ပင်ဖြစ်သည်။ သွပ်များဖြင့်ကာထားသော်လည်း အောက်ခြေက လွတ်နေသဖြင့်ခြေထောက်ကိုတော့မြင်ရသည်။ ရေစည်းနားရောက်မှကြည့်လိုက်ရာ ဘေးအိမ်မှ တဏှာရူးကောင်အေးမောင်မှန်း သိလိုက်ရသည်။ ပုံ့ပုံ့ ရှက်စိတ်ကြောင့်မျက်နှာများနီမြန်းနေသည်။ “မရှက်ပါနဲ့ ပုံ့ရယ်… ကို က ပုံ့ကို ဟိုးအရင်ထဲက စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်လိုးနေတာပါကွယ် ဟဲဟဲ”ဆိုပြီး.. ပုဆိုးကြီးအား ပုံကခနဲ ချွတ်ချလိုက်သည်။
အလို…. ၈လက်မနီးပါးရှည်သည့်လီးကြီးမှာ ဖုပိတ်တွေနှင့် အစိအစိတွေကောပါသေးသည်။ လုံးပတ်မှာ ကလေး လက်သီးစုတ် လောက်ရှိသည်။ လီးကြီးကိုကြည့်နေရင်ခုနက အထွတ်အထိတ်ရောက်နေသော ကာမစိတ်သည် ဗြန်းခနဲကွဲကာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အရည်များစိမ့်ထွက်လာသည်။ အေးမောင်သည် လိုးနေကျကောင်ဖြစ်သည့်အတွက် ပုံ့ပုံ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီကိုသိသည်။ သို့ရာတွင် တက်မလိုးသေးပေ။ ပုံ့ပုံ့အားရေစည်ပေါ်သို့မတင်လိုက်သည်။ ရေစည်မှာ ခါးတစ်ရပ်ပဲရှိသည့်အပြင် သစ်သားအဖုံး ဖုံးထားသည်။ ရေစည်ပေါ်တွင်ကားကားလေး တစ်တီတူးလိုဖြစ်နေသော ပုံ့ပုံ့အား ကြည့်နေရင်း လီးကြီးကို စောက်ဖုတ် ထိပ်ဝတွင် တေ့လိုက်သည်။ လီးထိပ်ဖျားကို စိုစွတ်စွတ်ဖြစ်သွားသော စောက်ဖုတ်အထိအတွေကြောင့် လီးကြီးမှာ ပိုလို့ကြီးလာသည်။ ပုံ့ပုံ့ စောက်ဖုတ်ကြီးအား လက်ညိုးနှင့်လက်လခယ်၂ခုပေါင်းကာ ဖြဲပြီး စောက်စိတည့်တည့်တွင်လီးကိုတေ့ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် တွင် ပုံ့ပုံ့၏ စအိုအဝတွင် လက်မဖြင့်ပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။ ပုံ့ပုံ့ ခုနကမှ အထွဋ်အထိပ်ရောက်ထားသော ကာမစိတ်တို့သည် အစိ ကိုလာထိသော လီးကြီးနှင့် ဖင်ဝသို့ ပွတ်သပ်မှုကြောင့် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေမိသည်။
ပုံ့ပုံ့ကိုယ်တိုင်မသိပေမယ့် ဖင်ကြီးကော့ ကာ ကော့ကာဖြင့် လီးကြီးကိုတောင့်တနေသည်။ မည်သို့ပင် ပုံ့ပုံ့လီးကိုတောင့်တတောင့်တ အေးမောင်ကတော့ ကြောင်ကကြွက် ကို ကစားသလို ကစားးနေသည်။ လီးကြီးကို အစိထိပ်မှဖယ်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်သည်။ “ဗြစ်..ဗြစ် ..စွပ်”ခနဲ မြည်သွားသည်။ ဒစ်ဖျားအထိဝင်အောင်သွင်းပြီးမှ စွပ်ခနဲ ပြန်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံ့ပုံ့ လူစိတ်ပျောက်သွားသည်။ ပက်လက်လှန်နေရာမှ ထပြီး ရေစည်ပေါ်မှောက်ချလိုက်သည်။ ခြေ၂ချောင်းကိုကားပေးထားသည်။ ပါးစပ်မှလည်း “လိုးပါ အကို အေးမောင်လိုးပါ…အကို့လီးကြီးနဲ့ ကျမ စောက်ဖုတ်ထဲပြဲအောင်လိုးပါ အကို” ဟုပြောရင်း လီးကြီးကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ စောက် ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်နေသည်။ ထိုစဉ်အေးမောင်မှ ပုံ့ပုံ့တင်ပါးအား ဖြန်းခနဲရိုက်ချလိုက်သည်။ “စောက်ကောင်မတော်တော် ယွနေတာ လား..အဲ့လောက်လီးဆာနေတာလား ဟေ။ နင်က အပျက်မလား စောက်ကောင်မ”ဟု ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း မိုက်ရိုင်းစွာပြောသည်။ သာမန်အချိန်တွင် အိနြေ္ဒသိက္ခာအပြည့်ဖြင့်နေခဲ့သော ပုံ့ပုံ့မှာ လီးသာသခင် လီးသာဘုရားဖြစ်နေသဖြင့် “ဟုတ်ပါတယ်..အကို လိုးပေးပါ ကျမတောင်းပန်ပါတယ်အကို.. ဟီး..ဟီး..”ဆိုပြီးငိုလေတော့သည်။ ရှက်စိတ်ကော လိင်စိတ်ပါ ငယ်ထိပ်တက်စောင့်နေ သဖြင့် လီးတရူးမဖြစ်နေလေတော့သည်။
”အေး ဟုတ်ပြီ နင့်ကိုငါ ဖင်အရင်ချမယ်။ ပြီးရင်စောက်ဖုတ်လိုးမယ်။ ဖင်အရင်မချရ ရင်မလိုးတော့ဘူး။ကျေနပ်လား။မကျေနပ်လည်းငါပြန်မယ်”ဟု အေးမောင်သည် အပိုင်ပြောသည်။ ပုံ့ပုံ့လန့်သွာသည်။ လက်သန်း တောင်မဝင်သော သူမ စအိုပေါက်ထဲသို့ ၈လက်မခန့်ရှိသော အအေးပုလင်းဖင်ခန့် ကြီးသော လီးကြီးဝင်မည့်အကြောင်းတွေးရင် ကျောချမ်းသွားသည်။ သို့ရာတွင်စောက်ဖုတ်ကလည်း အရည်တွေတရစပ်ကျနေသည်။ အလိုးအရမ်းခံချင်နေသည်။ မရတော့ ပေ….”ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို လိုးပါ ဖင်ကွဲပါစေ လိုးစမ်းပါ..။အကို လိုးလိုး””ဟု ဆိုကာ လီးကိုင်ပြီး ဖင်ဝတေ့ပေးသည်။ အေးမောင် လည်း…. “အေး အဲ့တာဆိုထစမ်းကောင်မ”ဟုပြောပြီး ရေစည်ထဲမ ရေတစ်ခွက်ခပ်ကာ လီးနှင့် ပုံ့ပုံ့ဖင်အားရေနဲ့ပဲသည်။ပြီးနောက် ရေစည်ပေါ်သို့ နဂိုအနေထားတိုင်းပြန်ထားသည်။ ဘေးမှ ဆပ်ပြာတုံးယူကာလီးကိုပွတ်သပ်ရင်း ပုံ့ပုံ့ စအိုဝကိုပါ ဆပ်ပြာတိုက် ပေးသည်။ထို့နောက်တွင်…ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သည် မဝင်.. ဆပ်ပြာတွေ အမြုပ်ထနေတာတောင်မနည်းထဲ့ရသည်။ ခါးကိုနှဲ့ကာ ထည့်သည်။ ဒစ်ဖျားလေးဝင်သွားသည်ပြန်ထွက်လာသည်။ နောက်ဆုံးအားထည့်ကာ ဖိထည့်လိုက်သည်။
”အားးးးးးးးးးးးးးးးး”ဟူသောအော်သံကြီးထွက်လာသည်။အေးမောင်အမြန်ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်သဖြင့် ဝူးးးခနဲဖြစ်သွားသည်။ သို့ရာတွင်အိမ်ထဲမှာ ၂ယောက်က ကြားသွားသည်။” ဘာဖြစ်တာလည်း ညီမလေး..” “စိတ်မပူနဲ့ ကိုကြီး.. ဟိုဘက်အိမ်က အောကာ ဖွင့်တာနေမယ်.. အမြဲ အသံနဲ့ဖွင့်နေကျ လိုးစရာရှိတာလိုး” “အင်းအင်း ညီမလေး..”ဆိုပြီး ၂ယောက်သားဆက်လိုးနေကြသည်။ ရေကပြင်မှာလည်း… ပုံ့ပုံ့ဖင်ထဲ လီးက ၂လက်မလောက်ဝင်နေပြီ..ပုံ့ပုံ့ဖင်ကြီးထဲ စို့ရိုက်ထားသလိုခံစားရသည်။ အေးမောင်မှာ လည်း တင်းကြပ်သော ကြွက်သားတွေကြောင့်ဆက်ထိုးထည့်မရ ဆွဲထုတ်မရဖြစ်နေသည်။ ကြံရမှာသည့်အဆုံး ရေစည်အား ကိုင် ကာ အားနဲ့ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ “အူး…’ခနဲအော်ကာ ပုံ့ပုံ့တစ်ယောက်ဖင်ကွဲသွားသည်။ သွေးတွေကျလာသည်။ ဖင်ကွဲသွား သလို စောက်ဖုတ်မှ အရည်များလည်းကျလာသည်။ ပုံပုံနောက်၂ချီလောက်ထပ်ပြီးသွားသည်။ အေးမောင်လည်း ဖင်ထဲမှလီးကို ဆွဲထုတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
အရည်များ ရွဲစိုနေသောကြောင့် ချောချောချူချူဝင်သွားသော်လည်း ကြီးထွား တုတ်ခိုင်သော လီးကြီးကြောင့် စောက်ဖုတ်နံရံသားများ ပွန်းကုန်သည်။ လီးကြီးမှာ သားအိမ်ကိုလည်းသွားသွားထောက်နေသည်။ ကာမအရသာ အပြည့်အဝခံစားရင်း ပုံ့ပုံ့တစ်ယောက် တစ်ချီထပ်ပြီးသွားပြန်သည်။ စောက်ဖုတ်လည်း ထပ်ကွဲကာ သွေးများကျ လာသည်။ သွေးများနှင့် စောက်ရည်တို့ပေါင်းကာ ညှီစို့စို့အနံ့သည် ရေကပြင်ဝယ် ထောင်းခနဲ ထနေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အချက်၃၀လောက်ဆောင့်ပြီးချိန်ဝယ် ပုံ့ပုံ့လည်း ၇ချီလောက်ပြီးကာ မျော့မျော့ပဲကျန်တော့သည်။ အေးမောင်လည်း ပီးချင်လာ သောကြောင့် ပျော့ခွေနေသော ပုံ့ပုံ့အား ရေကပြင်ပေါ်သို့လှဲချပြီး သုတ်ရည်များအား မျက်နှာပေါ်သို့ပန်းချလိုက်သည်။ ပုံ့ပုံ့မှာ လုံးဝ မလှုပ်နိုင်တော့ပေ။ “ပုံ့လေး..ကိုနောက်နေ့တိုင်းလာလိုးပေးမယ်နော.်.. ခုတော့သွားဦးမယ်”ဟုဆိုကာ လိုးကပစ်(လိုးပြီး ပစ်ထား)လုပ်ခဲ့သည်။ ပုံ့ပုံ့မှာ သုတ်ရည်ပူများမျက်နှာနှင့်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် အပြည့်…ပေါင်တစ်လျောက်နှင့်ရေကပင်တွင်လည်း သွေးနှင့်သုက်ရည်တို့ ရောအိုင်ထွန်းကာ အိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်…………….။ ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခှေးဖွဈတဲ့နေ့